Nke a bụ otú igwefoto oghere agbanwe nke Galaxy S9 na S9 + na-arụ ọrụ | Akụkọ akụrụngwa
Guysmụ okorobịa na iFixit enweela Galaxy S9 + ọhụrụ, ihe nlereanya ha abanyelarị ebukọta kpamkpam iji lelee nrụzi nke na-enye maka nrụzi n'ọdịnihu site n'aka ndị ọrụ chọrọ ịzụta ihe nrụzi iFixit iji dozie ngwaọrụ ha.
Dị ka a tụrụ anya, Galaxy S9 + gafererịrị na tebụl nke ụmụ okorobịa a iji gosi anyị ọ bụghị naanị na ọ na-emezi ya, kamakwa ụfọdụ n'ime njirimara ya kachasị mma, dị ka igwefoto ohuru nke S9 na S9 + nyere.
Otu n'ime isi ihe ọhụụ nke Galaxy S9 na S9 + wetaara anyị n'aka nwere ike ịchọta na ngalaba igwefoto ebe ụdị abụọ ahụ nwere oghere, ọkachasị n'ihe gbasara S9 +, nke nwayọ nke na-enye anyị oghere na-agbanwe agbanwe site na f / 1,5 ruo f / 2,4, mmadụ abụọ a bụ naanị oghere ndị ọ na-enye.
Ruo ugbu a, igwefoto Samsung niile, na nke ọtụtụ ndị na-emepụta, nyere anyị sistemu 5-agụba, sistemụ nke igwefoto ọhụrụ a na-agbanwe agbanwe. a gbanwetụrụ ka naanị 2 Ibé akwụkwọ, nke na-eme ka oghere lens dịrị ntakịrị na ọrụ iji bụrụ nke ziri ezi karị.
Akwụkwọ ndozi mmezi nke Galaxy S9 + bụ 4 n’ime 10, otu akara ahụ dị ka Galaxy Note 8. Ma iPhone X na Google Pixe 2 XL nwere akara nke 6 na 10, ebe ekwentị dị mkpa rụzuru akara 1 na 10.
Akụkụ nke ụta maka ọkwa a dị ala achọtara ọzọ na nnukwu ego nke gluu nke gbara gburugburu ọnụ ya, nke na-eme ka ọrụ nke ịmepe ngwaọrụ ahụ ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na anyị achọghị imebi ihuenyo. Banyere batrị ahụ, Samsung ejirila gluu mee ihe ọzọ ka o wee jikọta ya na ahụ dum.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Nke a bụ otú igwe foto na-agbanwe agbanwe nke Galaxy S9 na S9 + si arụ ọrụ